Glass Transparent Round Glass wuxuu qariyey Jar Jar oo ay weheliso Warshadaha Tin Lid iyo Soosaarayaasha | Chuancheng
Meel ku habboon in lagu hayo malab dabiici ah ama sharoobada xaaladaha ku habboon. Naqshadeynta qurxinta leh waxay u fiican tahay karinta jikadaada ama miiskaaga
Koofiyadaha dusha sare ee daboolka leh waxay isu dhigmaan dhalada afka si looga hortago in dheecaanku sii daato. Aad ayey aamin u tahay in la isticmaalo. Malabku si cad ayaa looga arki karaa dhalada hufan.
Weelkani waa cad yahay, taas oo ka dhigaysa weel ku habboon soo-saarka malabkaaga.
Koofiyadaha waa la furi karaa waana la xiri karaa si siman oo fudud.
Jar qumman oo lagu kaydiyo oo loo kaxeeyo Malabka: Dheriga malabka yar ee jilicsan ee daboolka leh iyo ul xafiil ah oo malab looga daadinayo, way fududahay in malab lagu daro cabitaannada kulul ama rootiga iyada oo aan wasaqayn maacuunta badan iyo iyada oo aan wax qashin lagu dhejin.
Malabka Malabku wuu sii Wanaagsan yahay wuuna Fudud Yahay Inuu Gaadho: Waxaa jira dhinac u furan in la qabto casho, hayaha malabkan ma ahan mid hawo hawo leh.
Dheriga malabku wuxuu ka samaysan yahay quraarad borosilicate sare oo dhalo-aan sun ah lahayn, Tas-hiilaad lahayn, Ma wasakhayn karo, Pretty, Transparent.9 ounce awood weyn.
Waxay hadiyad weyn ugu noqoysaa milkiileyaasha guryaha cusub, kuwa shaaha jecel, ama qof kasta oo ku raaxeysta karinta. Muraayaddan muuqata ee muuqaalka leh ayaa ah mid weyn oo loogu talagalay jikada kasta oo waxaa loo dammaanad qaaday inay soo jiitaan dareenka
Si sahlan ugu dar malab cabitaanada kulul ama rootiga adigoon dareereynin maacuun dheeraad ah ama aan keenin dhejis.
Wax aan sun ahayn, ur lahayn, wasakhaysan wasakhaysan, qurux iyo hufnaan. Caafimaadka cagaaran.
Naqshad hufan ayaa fududaysa in la arko waxa dheriga ku hadhay.
Malabka iyo malabka dhaldhalaalka leh ee naqshadda wejiga looguna talagalay adiga kuu habboon
Ku dhejinta weelka dhalada ayaa si wax ku ool ah uga horjoogsan kara malabku inuu galo qashinka.
Meel ku habboon in lagu hayo malab dabiici ah ama sharoobada xaaladaha ku habboon. Naqshadeynta qurxinta leh waxay ku fiican tahay karinta jikadaada ama ku adeegashada miiskaaga Furuqa daboolka sare ee miiska daboolka ayaa la mid ah dhalada afka si looga hortago in dareeraha dareeraha ah. Aad ayey aamin u tahay in la isticmaalo. Malabka si cad ayaa looga arki karaa dhalada hufan. Weelkaani waa mid cad, taasoo ka dhigaysa weel ku habboon soo-saarka malabkaaga.
Koofiyadaha waa la furi karaa waana la xiri karaa si siman oo ea
Hore: Weelka kulul ee kushiinka lagu iibiyo oo dhalada lagu keydiyo dhalooyinka cuntada lagu keydiyo oo leh dabool bir ah
Xiga: Arooska Mason Jar wuxuu Jecelyahay Apothecary Jars Honey Bot Botles
Dhalada Dhalada ah ee Malabka
Jearshooyinka loo yaqaan Hexagon Honey
Jarsiyada Beerta Malabka ee Malabka
Jarsiyada Jars Glass Hexagonal
Jarshooyinka Barxadda Laba Jibaaran
Weelka kulul ee kushiinka lagu iibiyo wuxuu dhigayaa kaydinta cuntada ...
Jearsooyinka Glass Hexagon